साइनस संक्रमण उपचार र औषधि | एकलकेयर - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी कम्पनी समुदाय, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण खेलहरु औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार कम्पनी, चेकआउट समुदाय औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> साइनस संक्रमण उपचार र औषधिहरू
साइनस संक्रमण उपचार र औषधिहरू
साइनस संक्रमण के हो? | साइनस संक्रमण निदान | साइनस संक्रमण उपचार विकल्पहरू | साइनस संक्रमण औषधिहरू | सर्वश्रेष्ठ साइनस संक्रमण औषधिहरू | साइनस संक्रमण को साइड इफेक्ट | साइनस संक्रमण घरेलु उपचार | FAQ | संसाधनहरू
सबैलाई थाहा छ के जाग्ने जब जाडो र एलर्जीको मौसम वरिपरि घुम्दछ — तपाई भरिपूर्ण नाक, खुसीले घाँटी, र बारम्बार टाँसेको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईको साइनस लक्षणहरु झन् झन् खराब हुँदै जान्छ र तपाईले लामो समय सम्म अनुहारको दुखाई, नाक बग्ने, टाउको दुखाइ, र नाकको भीड अनुभव गर्नुभयो भने तपाईलाई अझ गम्भीर समस्या हुन सक्छ।
जब चिसो वा एलर्जी लक्षणहरू टाढा जाँदैनन्, तिनीहरू साइनस संक्रमणको कारण हुन सक्छ। साइनस ईन्फेक्शन के हो भन्ने बारेमा यस गाईडको प्रयोग गर्नुहोस् र तपाई घरमा एक औषधी र वैकल्पिक उपचारको साथ कसरी उपचार गर्न सक्नुहुनेछ।
साइनस संक्रमण (साइनसिटिस) के हो?
साइनस संक्रमण, जसलाई साइनसिटिस वा राइनोसिनुसाइटिस पनि भनिन्छ, यस्तो अवस्था हो जहाँ नाकको परिच्छेदका अues्गिक ऊतकिहरू सुन्निन्छ। साइनस संक्रमण धेरै सामान्य छ, करीव million करोड मानिसहरूलाई असर संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रत्येक वर्ष, र यी संक्रमण को एक ठूलो प्रतिशत आफ्नै समाधान। सामान्य साइनसाइटिस लक्षणहरूमा नाकको भीड, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, र अनुहारको दुखाइ समावेश छ।
सरल रूपमा वर्णन गरिएको छ, साइनस संक्रमण तब हुन्छ जब एक हुन्छ साइनस मा संक्रमण , खोपडीमा एयर भरिएको खाली स्थानको एक जडान प्रणाली। सामान्य अवस्थामा म्युकोस बाहिर निस्कन्छ ताकि साईनस प्वालबाट हावामा जान सकोस्। जब तरल पदार्थ साइनसमा निर्माण हुन्छ, कीटाणुहरू बढ्छन् र संक्रमण हुन सक्छ।
साइनस संक्रमणले नाकको भीडले गर्दा अनुहारको अस्वस्थता पैदा गर्न सक्छ। तपाईले टाउको दुखाइ, आँखाको पछाडि दुखाइ, र अनुहारको कोमलता वा सूजन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य साइनस संक्रमण लक्षणहरू खराब चिसो वा तीव्र एलर्जी भएको जस्तै हुन्छन् जसमा नाकको डिस्चार्ज, पोस्टनेसल ड्रिप, थकान, साइनस प्रेशर, गन्धको भावना हराउनु, घाँटीको जलन, र ज्वरो पनि समावेश छ।
सामान्यतया एलर्जी वा चिसो द्वारा सुरु, एक साइनस संक्रमण धेरै प्रकारका लिन सक्दछ। तीव्र साइनसाइटिसले हल्का लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ र एन्टिबायोटिक बिना चाँडै टाढा जान सक्छ। यी केसहरू प्राय जसो सामान्य सर्दीको जस्तै भाइरस संक्रमणको कारण हुन्छन् र तपाईंको आरामको लागि लक्षणात्मक उपचार बाहेक अरू केहि पनि आवश्यक पर्दैन।
अर्कोतर्फ, क्रॉनिक साइनसिटिस धेरै महिनासम्म रहन सक्छ र धेरै समस्याग्रस्त हुन सक्छ। संक्रमणको गम्भिरतामा निर्भर गर्दै तपाईले यसलाई घरेलु उपचारको साथ आफैंमा उपचार गर्न सक्नुहुनेछ, तर यस्तो लाग्दछ कि तपाईले गर्नुहुनेछ। एन्टिबायोटिक उपचार आवश्यक छ ।
केहि समूहहरूको साइनस संक्रमण हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यदि तपाईं धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने, अर्कै उचाइमा यात्रा गर्नुहुन्छ, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली छ, एलर्जीक राइनाइटिस, वा सिस्टिक फाइब्रोसिस, तपाईं साइनस संक्रमण विकासको लागि बढी जोखिममा हुनुहुन्छ।
साइनोसिटिस कसरी निदान गरिन्छ?
यदि तपाइँ पीडा र दबाब अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ जुन एक हप्तादेखि १० दिन भित्रमा स्पष्ट हुँदैन, यो एक डाक्टरको भेट हुने समय तालिका हुन सक्छ। साइनस संक्रमणको लागि मूल्या be्कन गर्न तपाईको प्राथमिक उपचार चिकित्सकलाई भेट्न सक्नुहुन्छ।
साइनस संक्रमण प्रायः इमेजिंग वा संस्कृतिहरूको आवश्यकता बिना नै अनुभवजन्य रूपमा निदान गरिन्छ, वर्णन गर्दछ Lindsey एल्मोर , Pharm.D।, BCPS। एक साधारण मेडिकल जाँच र तपाईंको लक्षणहरूको समीक्षा तपाईको डाक्टरको लागि साइनस संक्रमण पहिचान गर्न पर्याप्त हुनुपर्दछ। तपाईको डाक्टरले उज्यालोको लागी उज्यालोको लागी तपाईको नाक जाँच गर्नेछ। ऊ वा उनीले तपाईंलाई कुनै पनि दुखाइको बारेमा सोध्न सक्छ जुन तपाईंले साईनस गुहाहरूमा पछाडि ट्रेस भएको छ वा छैन जाँच्नको लागि।
विरलै अवस्थाहरूमा, वा यदि तपाइँ बारम्बार संक्रमणहरू पाउनुभयो भने, तपाइँको डाक्टरले फ perform्गल संक्रमण जस्ता अन्य सर्तहरू नकार्न अन्य परीक्षणहरू गर्न सक्दछ। यसमा एलर्जी परीक्षण, साइनसको आँखाको रूपमा निरीक्षण गर्न एक नाकको एन्डोस्कोपी, नाक निकासीको संस्कृतिको लागि तपाईंको नाकमा स्वाब्बिंग, वा असामान्यताहरूको लागि स्क्यान गर्न प्रयोगशालाको इमेजरी समावेश हुन सक्छ।
लक्षण एक्युट (छोटो अवधि) वा पुरानो (लामो अवधि) हुन सक्छ, र तपाइँले डाक्टरको सहयोग लिनु पर्छ यदि तपाइँसँग १० दिन भन्दा बढि लक्षणहरू छन् भने, वा काउन्टर एजेन्टहरूसँग समाधान नगरिएका छन् किनकि यो तपाइँसँग भएको संकेत हो। जीवाणु साइनस संक्रमण, डा। एल्मोर भन्छन्।
साइनस संक्रमण उपचार विकल्पहरू
साइनस संक्रमणको लागि त्यहाँ धेरै उपचार विकल्पहरू छन्, तर उत्तम उपचार विकल्प केसको गम्भीरतामा फरक पर्दछ। केहि तीव्र साइनस संक्रमण कुनै उपचार बिना तिनीहरूको आफ्नैमा स्पष्ट हुनेछ, र तपाइँलाइ लाग्दछ कि यो चिसो थियो। अरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा अधिक गम्भीर हस्तक्षेपहरू आवश्यक पर्दछ।
मानक उपचार स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु एक अनुमानित ब्याक्टेरियस साइनस संक्रमण को लागी एक एंटीबायोटिक हो। यद्यपि, यदि तपाईलाई साइनस इन्फेक्सन भएको छ जसलाई सर्दी संक्रमण हो जुन साधारण सर्दीको रूपमा भाइरल संक्रमणको कारणले हुन्छ भने, तपाइँको डाक्टरले एन्टिबायोटिक लिनु हुँदैन किनभने यी औषधीहरूले केवल ब्याक्टेरिया संक्रमणलाई उपचार गर्दछ। यसको सट्टामा, तपाई साइनस इन्फेक्शनलाई लक्षणात्मक रूपमा उपचार गर्न सक्नुहुनेछ जबसम्म यसको समाधान हुँदैन, नाकको डिकोनजेन्ट्स र एन्टिहिस्टामाइन्सको साथ।
त्यहाँ साइनस संक्रमणका लक्षणहरू उपचार गर्न धेरै तरिकाहरू छन् घरमा ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि र घरेलु उपचारको साथ। ओटीसी एन्टीहिस्टामाइन्सले हिस्टामाइनको प्रभावहरूलाई रोक्दछ, छींक र नाक बहेको जस्तो लक्षणहरूलाई मद्दत गर्दछ। पानी पिउने, तपाईंको साइनसलाई हाइड्रेटेड राख्ने (नाक कुल्ला उत्पादनको साथ) र न्यानो कम्प्रेसको प्रयोग जस्ता साधारण उपचारले पनि साइनस संक्रमणका लक्षणहरूको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईको नाकको प्यासेज सफा राख्दा तपाईले भविष्यका साइनस इन्फेक्सनहरू रोक्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं एलर्जी वा चिसो मौसममा साइनस समस्या भएको आशा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको नाकको अंशहरू नुन पानीको घोलको साथ बाहिर निकाल्दा तपाईंलाई साइनस संक्रमणको पीडाबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
लगातार र क्रॉनिक साइनस इन्फेक्सनस साइनसको शारीरिक संरचना जस्तै विकृत सेप्टम वा नाक पोलिप्सको साथ अधिक गम्भीर समस्याको संकेत हुन सक्छ। यी मुद्दाहरूलाई भविष्यमा निरन्तर साइनस संक्रमणहरूबाट बच्नको लागि एलर्जी विशेषज्ञ, ओटोलारिologist्गोलोगिस्ट वा अन्य चिकित्सकबाट विशेष उपचारको आवश्यक पर्न सक्छ।
पीठ दुखाइ को लागी काउन्टर मांसपेशिहरु आराम
साइनस संक्रमण औषधिहरू
जब साइनस संक्रमण उपचारको लागि औषधिहरू आवश्यक हुन्छन्, त्यहाँ धेरै फरक-फरक विकल्पहरू छन्। साइनस संक्रमणहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिने प्राथमिक प्रकारका औषधीहरूले डोनजेन्जेन्ट्स, एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड्स, एन्टिहिस्टामाइन्स, र नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) समावेश गर्दछ।
डिकन्जेन्टेन्ट औषधिहरूले नाकको परिच्छेदहरूमा सूजन, दबाब र बलगमको भीडलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। साइनस संक्रमणको लागि डिकन्जेन्टेन्टहरू सामान्यत: नासिका स्प्रेको रूपमा जस्तै विक्स सिनस नेसल स्प्रे वा अफ्रिन नेजल स्प्रे (दुबै ऑक्सीमेटाजोलिन समावेश गर्दछ), र सुदाफेड जस्ता मौखिक गोलीका रूपमा आउँदछन्।
यी औषधीहरूले चाँडो साइनसको दबाब कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तर लामो समयको लागि लिनुहुँदैन। अधिक प्रयोग गर्ने डिon्जेन्स्टन्ट नाक स्प्रेहरू वास्तवमै बनाउन सक्दछन् भीड जत्तिको नराम्रो , त्यसैले तपाईले यी प्रत्येक औषधि तपाईको डाक्टरले निर्देशन अनुसार लिनु पर्छ। डिकन्जेन्टेन्ट नाक स्प्रे अधिकतम days दिनको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। यी नाकको स्प्रेको सामान्य साइड इफेक्टहरूमा जलन, ड्राईनेस, जल्न, चुरो, र छींक समावेश छ।
यदि डिकन्जेस्टन्ट नाक स्प्रेले तपाईंलाई बाहिर सुकाउँदछ भने, तपाईं एक नुनिलो नाक स्प्रे थप्न सक्नुहुन्छ वा नाक अनुच्छेदहरू ओछ्याउन ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ — नमकीन उत्पादनहरू अवधिमा कुनै सीमितता बिना आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नाक डिसोनेजेन्ट मौखिक ट्याब्लेटले तपाईंको रक्तचाप बढाउन सक्छ, त्यसैले यदि तपाईंलाई उच्च रक्तचाप छ भने, यसलाई प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस्।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, साइनस संक्रमणको लागि एन्टिबायोटिक आवश्यक हुँदैन, तर चिकित्सकहरूले एउटा लिखित सल्लाह दिन सक्छन् यदि तिनीहरूलाई ब्याक्टेरियाको संक्रमण साइनोसिटिसको कारण हो भन्ने लाग्छ। जेनेरिक एन्टिबायोटिक मनपर्दछ अमोक्सिसिलिन वा सेफडिनिर साइनस संक्रमण समाधान गर्न ब्याक्टेरियाको वृद्धि रोक्न वा मार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
साइनस संक्रमणका लागि सिफारिस गरिएका अन्य लोकप्रिय एन्टिबायोटिकमा Zithromax (azithromycin) वा Augmentin समावेश छ। एन्टिबायोटिकको सामान्य साइड इफेक्टमा मतली, बान्ता र पखाला समावेश छन्।
कोर्टिकोस्टेरोइड्सले साइनसको जलन कम गरेर साइनस ड्रेनेज सुधार गर्न सक्दछ। डाक्टरहरूले सामान्यतया गम्भीर साइनस संक्रमणका लागि स्टेरोइड मात्र लेख्छन्। साइनस संक्रमण उपचारको लागि प्रयोग हुने सबैभन्दा धेरै सामान्य स्टेरोइडहरू प्रेडनिसोन र मेडरोल (मेथिलप्रेडनिसोलोन) हुन्।
फ्लुटिकासोन नाक स्प्रे एक स्टेरॉयड औषधि हो जुन साइनसिटिसका लक्षणहरूलाई कम गर्नका लागि ओभर-द-काउन्टर (वा प्रिस्क्रिप्सनद्वारा) किन्न सकिन्छ। फ्लोनेज एक लोकप्रिय नाक स्प्रे हो कि तपाईं हरेक नाकमा स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ छींकने, बहेको नाक, र भीडबाट राहत पाउन। लामो समयसम्म स्टेरोइडको प्रयोगले शरीरको हर्मोनको स्तरमा अवरोध खडा गर्न सक्छ, त्यसैले उनीहरूलाई केवल सल्लाहको रूपमा लिनु पर्छ।
धेरै साइनस संक्रमणहरू एलर्जीको कारणले हुन्छन्, त्यसैले एन्टीहिस्टामाइन्सले एलर्जीको प्रतिक्रियालाई घटाएर वा बन्द गरेर साइनोसिटिसको मामला खाली गर्न मद्दत गर्दछ। बेनाड्रिल एक सामान्यतया प्रयोग गरिने ओटीसी एन्टीहिस्टामाइन हो कि छींकने, नाक बग्ने र साइनस संक्रमणका अन्य लक्षणहरूलाई हटाउन सक्छ। एन्टीहिस्टामाइन्सको मुख्य साइड इफेक्टमा चक्कर, सुक्खा मुख, र निन्द्रा समावेश छ।
नयाँ एन्टीहिस्टामाइन्सहरू जस्तै क्लेरटिन, एलेग्रा, जाइरटेक, र जाइजेल, समान लक्षणहरूको उपचार गर्दछ तर कम तन्द्राको कारण दिन्छ। केहि एन्टीहिस्टामाइन्समा एक डिकन्जेस्टन्ट हुन्छ। उपयुक्त औषधि छनौट गर्न सहयोगको लागि फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् जुन तपाईंको लक्षणहरूलाई मद्दत गर्दछ र तपाईको मेडिकल अवस्था (हरू) र तपाईले लिनुहुने औषधिहरूलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित र लिन उचित छ।
Tylenol र NSAIDs
ओटीसी दुखाइ कम गर्नेले साइनस संक्रमणसँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। टायलेनोल (एसिटामिनोफेन) एक एनाल्जेसिक हो जसले पीडा र ज्वरोलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि अडविल (आइबुप्रोफेन), एलेभ (नेप्रोक्सेन), र एस्पिरिन गैर-ईन्टर-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडीहरू) हुन्।
NSAIDs पीडा र ज्वरो को लक्षणहरु को लागी, साथै सूजन / सूजन को साथ मद्दत गर्दछ। NSAIDs ले अन्य ड्रग्ससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ, त्यसैले तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाइँ NSAID लिन सक्नुहुन्छ अन्य औषधिहरु संग। साथै, NSAIDs लामो समयको लागि लिनु हुँदैन, त्यसैले आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् यदि यो उपचार विधिले तपाईंको साइनसाइटिस resolve-१० दिन भित्र समाधान गर्दैन भने।
साइनस संक्रमणको लागि सबैभन्दा उत्तम औषधी के हो?
साइनस संक्रमण उपचारको लागि उत्तम औषधि तपाईंको डाक्टरले निर्धारण गर्दछ र केस अनुसार फरक हुन्छ। तल, तपाईले के अपेक्षा गर्नु पर्ने जान्नका लागि सबैभन्दा सामान्य साइनस संक्रमण औषधिहरूको तुलना देख्न सक्नुहुन्छ।
साइनस संक्रमणको लागि उत्तम औषधिहरू
औषधि नाम औषधि वर्ग प्रशासन मार्ग मानक वयस्क खुराक सामान्य साइड इफेक्टहरू
फ्लोनेज (फ्लुटिकासोन) कोर्टिकोस्टेरोइड नाक स्प्रे दिनको प्रत्येक नाकमा दुई स्प्रेहरू टाउको दुख्ने, नाक बर्न वा जलन, नाक लगाउने, चक्कर आउने
Sudafed (स्यूडोफेड्रिन) डिकन्जेन्ट मौखिक २ ट्याब्लेटहरू प्रत्येक -6- hours घण्टा; कुनै २ 24 घण्टा अवधिमा tablets भन्दा बढि ट्याब्लेटहरू टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, अनिद्रा, घबराहट
बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) एन्टीहिस्टामाइन मौखिक १-२ क्याप्सूल (हरू) वा ट्याब्लेट (हरू) हरेक -6--6 घण्टा; २ 24 घण्टामा times पटक भन्दा बढि नलिनुहोस् चक्कर, सुक्खा मुख, तन्द्रा
म्यूसिनेक्स (ग्वाइफेनिसिन) Expectorant (छाती भीड / उत्पादक खोकीको लागि) मौखिक एक १२०० मिलीग्राम ट्याब्लेट हरेक १२ घण्टा; २ tablets घण्टामा २ भन्दा बढी ट्याब्लेटहरू छैन; चाउनु वा क्रस नगर्नुहोस्। पानीको गिलासको साथ लिनुहोस्। टाउको दुखाइ, मतली, चक्कर, उनी निद्रा
खुराक तपाईंको चिकित्सक द्वारा तपाइँको चिकित्सा अवस्था, उपचार को लागी प्रतिक्रिया, उमेर, र वजन को आधार मा निर्धारित गरीन्छ। अन्य सम्भावित साइड इफेक्टहरू अवस्थित छन्। यो पूर्ण सूची होईन।
साइनस संक्रमण औषधिहरूको सामान्य साइड इफेक्टहरू के के हुन्?
साइनस संक्रमण औषधिहरूको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट तपाईले प्रयोग गर्ने औषधीको प्रकारले फरक हुन्छ। डिकन्जेन्ट्सले घबराहट, अनिद्रा, र भोकको क्षति निम्त्याउँछ। एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्टमा मतली, बान्ता र पखाला समावेश छन्। एन्टीहिस्टामाइन्स र स्टेरोइडले चक्कर र निद्रा गडबडी निम्त्याउन सक्छ।
यो साइनस संक्रमण औषधि साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूची होईन। यदि तपाइँ कुनै औषधि वा उपचारबाट कुनै प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने, यो तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ।
साइनस संक्रमणका लागि उत्तम घरेलु उपचार के के हुन्?
त्यहाँ केही सरल घरेलु उपचारहरू छन् जुन तपाईंको पीडा कम गर्ने र तपाईंको साइनस खाली गर्न मद्दतको लागि प्रभावकारी हुन सक्छ। औषधी प्रयोग गर्नबाट जोगिन, नाक र अनुहारमा न्यानो कम्प्रेस गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र न्यानो खारा सि .्गको साथ फ्लस गर्नुहोस्, डा। एल्मोर भन्छन्।
TO नाक सिंचाइको लागि घरेलु समाधान साइनस संक्रमणको लागि उत्तम उपचार उपचारहरूमध्ये एक हो। तपाईको नासिका अंश सफा राख्न मद्दत गर्नको लागि तपाईले सिरिंज वा नेटी पटको प्रयोग गरी नुन-आयोडाइज्ड नुन, बेकिंग सोडा र गुनगुना डिस्टिल (वा पहिले उमालेको) पानीको लागि प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। वा, तपाईं आफ्नो फार्मेसीमा उत्पादन छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन पहिल्यै तयार छ र प्याकेटहरू मिक्स गर्न तयार छ।
साइनस संक्रमणको लागि अन्य घरेलु उपचारहरूमा धेरै पानी पिएर हाइड्रेटेड रहनु, डिकन्जेन्टन्ट नाकको स्प्रे प्रयोग गरेर र स्टोभमा वा स्नानमा स्निम स्वास राख्नु समावेश छ। केहि जीवनशैली समायोजनले नाक नालीलाई बढावा दिन सक्छ जस्तै रातमा उठेको टाउकोको साथ सुत्न वा एक शुष्क वातावरणबाट बच्नको लागि तपाईंको घरमा एक ह्युमिडिफायर चालू राख्नु।
घरमा दुखाइ कम गर्न, तपाई न्यानो कम्प्रेस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा कञ्जेशनबाट टाउको दुख्ने र अनुहारको दुखाइ कम गर्न ओभर-द-काउन्टर दुखाई औषधी लिन सक्नुहुन्छ।
साइनस संक्रमणको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
तपाईं कसरी साइनस संक्रमणबाट छिटो हटाउनुहुन्छ?
तपाईले साइनस संक्रमणको उपचार घरमा वा ओटीसी औषधिहरूको साथ लक्षण राहतका लागि गर्न सक्नुहुन्छ, र / वा प्रिस्क्रिप्शन एन्टिबायोटिक औषधि, ब्याक्टेरिया संक्रमणको मामलामा। हाइड्रेटेड रहनुहोस्, एक ह्युमिडिफायर प्रयोग गर्नुहोस्, र तपाईंको साइनस संक्रमणलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्न मद्दतको लागि एक झुकावमा सुत्न। तपाईलाई एन्टिबायोटिक चाहिएको छ कि भनेर हेर्न हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
साइनस संक्रमणको लागि उत्तम उपचार के हो?
नाक सिंचाइ र नाकको स्प्रेहरू साइनस संक्रमणको लागि साधारण उपचार हो। यदि संक्रमण को कारण एक ब्याक्टेरिया छ, तपाईं संक्रमण खाली गर्न एन्टिबायोटिक आवश्यक हुन सक्छ। तपाईको फार्मासिष्ट एक ठूलो स्रोत हुन सक्छ एक ओटीसी नाक स्प्रे छनौट गर्न को लागी तपाइँको विशेष लक्षणहरु लाई मद्दत गर्न को लागी।
रातमा दमा खोकी को लागी घरेलु उपचार
के तपाईं एन्टिबायोटिक बिना साइनस संक्रमणबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ?
धेरै साइनस संक्रमणहरू सामान्य सर्दी जस्तो भाइरसको कारणले हुन्छन् र उपचारका लागि एन्टिबायोटिकको आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंसँग हल्का लक्षणहरू छन् भने, ओटीसी औषधीहरूले तपाईंको लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ जब सम्म तपाईं राम्रो महसुस गर्नुहुन्न। यद्यपि लक्षणहरू बढ्यो वा सात दिन पछि सुधार भएन वा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्, वा कुनै समयमा तपाईंलाई तीव्र / गम्भीर दुखाइ वा दबाब, वा उच्च ज्वरो छ भने।
यदि तपाइँ साइनस संक्रमणको उपचार नगरेमा के हुन्छ?
केहि साइनस संक्रमणहरू आफैंमा स्पष्ट हुन सक्छन्। अन्य पुरानो र चिरस्थायी हुन सक्छ। यदि तपाइँका लक्षणहरू 7-१० दिन भन्दा बढी रहन्छ भने, वा यदि तपाइँसँग गम्भीर लक्षणहरू छन् भने चिकित्सकलाई भेट्न उत्तम हुन्छ।
साइनस संक्रमणको केहि प्रभावकारी घरेलु उपचार के हुन्?
न्यानो कम्प्रेस, पिउने पानी, र नाक सिंचाइको लागि समाधान प्रयोग साईनस संक्रमणको लागि घरेलु उपचारहरू प्रभावकारी छन्। यी उपचारहरूले लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, तर यदि संक्रमणको कारण ब्याक्टेरिया हो भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एन्टिबायोटिक पनि लिनेछ।
साइनसिटिसको लागि डाक्टरले के सल्लाह दिनेछ?
यदि संक्रमणको कारण ब्याक्टेरिया हो भने, डाक्टरले एन्टिबायोटिक लिनेछ। यदि कारण भाइरल छ भने, तपाईंको चिकित्सकले ओटीसी डिकोन्जेन्ट्स, एनएसएआईडीहरू, एन्टिहिस्टामाइन्स, वा प्रिस्क्रिप्शन स्टेरोइड सिफारिस गर्न सक्छ।
के तपाई साइनस संक्रमणका लागि एन्टिबायोटिक लिनुहुन्छ?
एन्टिबायोटिक केवल जीवाणुद्वारा साईनस संक्रमणको लागि प्रभावकारी हुन्छ। एक डाक्टरले तपाईलाई उत्तम उपचार विधि निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
म घरमा साइनोसिटिसको उपचार कसरी गर्न सक्छु?
तपाईं साइन-इन काउन्टर डिकोन्जेन्ट्स, एन्टिहिस्टामाइन्स, वा NSAIDs लिन सक्नुहुन्छ साइनसको जलनको लक्षण घटाउन र घर मा नाक निकासी बढाउन। यी ओटीसी उपचारले लक्षण राहत प्रदान गर्दछ, तर ब्याक्टेरिया संक्रमणको उपचार गर्दैन।
साइनस संक्रमणको लागि सम्बन्धित स्रोतहरू
साइनस संक्रमण (साइनसिटिस)
साइनस संक्रमणको लागि तपाईंलाई साँच्चिकै एन्टिबायोटिकको आवश्यक छ?
साइनसाइटिसको बारेमा के गर्ने
लिरिकाका gener जेनेरिक संस्करणहरू अब बिरामीहरूका लागि कम लागतमा उपलब्ध छन्
Zyrtec मा मुख्य घटक के हो
किन tamiflu बीमा संग यति महंगा छ
cephalexin 500 mg के को लागी प्रयोग गरिन्छ?
lisinopril एक बीटा अवरोधक वा ऐस अवरोधक हो
कति मानव रगत समूहहरु छन्
लिन्जेस लाई कब्जियत को लागी काम गर्न कती समय लाग्छ?